Chalazion (အဆီဂလန်းများပိတ်၍ အရည်အိတ်များဖြစ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Chalazion (အဆီဂလန်းများပိတ်၍ အရည်အိတ်များဖြစ်ခြင်း)
Chalazion (အဆီဂလန်းများပိတ်၍ အရည်အိတ်များဖြစ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
မိုင်ဘိုးမီးယန် အရေအိတ် သို့မဟုတ် အပေါ်မျက်ခွံ အရေအိတ် ဟုခေါ်သော chalazion ဆိုသည် မှာ အဆီဂလန်း၏ ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မျက်ခွံ ပေါ်တွင် ဖူးရောင် နေသော အလုံးအခဲ ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လူအတော်အများသည် chalazoin ကို ဘတ်တီးရီယာူ ကြောင့်ဖြစ်သော မျက်စိစွံခြင်းနှင့် မှားယွင်း တတ်ကြပါသည်။ ကွဲပြားချက်မှာ ဘတ်တီးရီးယား ကြောင့် မျက်စိစွံခြင်းသည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပြီး ပို၍ နာကျင် စေပါသည်။ chalazoin သည် နာကျင်မှုနည်းပြီး ၂-၈ မီလီမီတာ လောက်ရှိသော အရည်များ ပြည့်နေသော အလုံးအခဲ လေး အနေဖြင့် မြင်ရပါသည်။ များသောအားဖြင့် အပေါ်မျက်ခွံ တွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး မျက်လုံး နှစ်ဘက် လုံးကို ထိခိုက်စေပါသည်။
Chalazion (အဆီဂလန်းများပိတ်၍ အရည်အိတ်များဖြစ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Chalazoin သည် အဖြစ်များပြီး လွယ်ကူစွာ ကုသနိုင်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ ရော ကလေးများတွင်ပါ ဖြစ်ပွားပါသည်။ အသက် ၃၀-၅၀ ရှိသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ တွင် ပို၍ ဖြစ်ပွားပါသည်။ သင့်တွင် နာတာရှည်မျက်ခွံရောင်ခြင်း၊ ဝက်ခြံပေါက်ကာမျက်နှာနီခြင်း၊ အဆီ ဂလန်းများ ထကြွခြင်း ရှိပါက chalazoin ပိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Chalazion (အဆီဂလန်းများပိတ်၍ အရည်အိတ်များဖြစ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Chalazoin ၏ အဖြစ်များသော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ
အပေါ်မျက်ခွံတွင် မနာကျင်သော အနီရောင် အလုံးအခဲများ
အထက်တွင် မပြောထားသော ရောဂါလက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သောကများ ရှိပါက အချက်အလက်များ ပိုမိုရရှိရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ chalazoin ကို မိမိသဘောဖြင့် ဖျစ်ခြင်း ညစ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
ရောဂါလက္ခဏာများ ဆိုးရွားလာပါက သို့မဟုတ် မပျောက်ကင်းပါက ဆရာဝန်နှင့် သွား ရောက်ပြသပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် chalazoin သည် သင့်မျက်လုံးအား ဖိအား ဖြစ်စေနိုင်သည် အထိ ကြီးလာနိုင်ပါသည်။ ထို့အခါအမြင်ဝေဝါးခြင်း ဖြစ်လာပါသည်။ အမြင်များဆိုးရွားလာပါက ဆေးကု သမှု အမြန် ခံယူရန် အရေးကြီးပါသည်။
Chalazion (အဆီဂလန်းများပိတ်၍ အရည်အိတ်များဖြစ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Chalazoin သည် မျက်ခွံရှိ အဆီဂလန်း ပိတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အဆီဂလန်း များသည် အဆီများကို ထုတ်လုပ်၍ မျက်လုံးကို ချောမွတ်စေပါသည်။ အဆီဂလန်း များ ပိတ်သွားပါက မျက်လုံးထဲတွင် အရည်များ စုပြုံလာပြီး လုံလောက်စွာ အရည်စစ် မထုတ်နိုင် ပါ။ ထိုအခါ အရည်များ ပြည့်နေသော အလုံးအခဲ ဖြစ်စေပြီး chalazoin ဖြစ်လာပါသည်။
ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် မျက်စိစွံခြင်း ရှိပါက chalazoin ဆက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မျက်ခွံ ရောင်ခြင်း ကဲ့သို့ မျက်လုံးအခြေအနေများ နှင့် ဝက်ခြံပေါက်ကာ မျက်နှာနီခြင်း၊ နှင်းခူနာ ပေါက် ခြင်း စသော အရေပြား အခြေအနေများ ရှိပါက ပို၍ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Chalazion (အဆီဂလန်းများပိတ်၍ အရည်အိတ်များဖြစ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Chalazoin ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ကိုမြင့်စေသောအကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာ အားဖြင့်-
Chalazoin ဖြစ်မှုမှတ်တမ်းရှိခြင်း။ သင့်တွင် အရင်က chalazoin ဖြစ်ဖူးပါက နောက်တစ်ဖန် ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု နည်းခြင်း။ လက်အမြဲတမ်းဆေးရန် အရေးကြီးပါသည်။ လက်ညစ်ပတ်ခြင်း သည် အဆီဂလန်းများကို အညစ်အကြေးများဖြင့် ပိတ်စေပါသည်။
မျက်လုံးအား ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း။ နာတာရှည် မျက်ခွံရောင်ခြင်း ရှိပါက chalazoin ဖြစ်ပွားနိုင်နှုန်း ပို၍ များပါသည်။
အရေပြားရောဂါများ။ နှင်းခူနာပေါက်ခြင်း၊ ဝက်ခြံများပေါက်ကာ မျက်နှာ နီရဲခြင်း၊ အဆီဂလန်းများ ထကြွခြင်း တို့ပါဝင်ပါသည်။
အခြားကျန်းမာရေး အခြေအနေများ။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို မြင့်တက်စေသော အခြား အခြေ အနေများလည်း ရှိပါသည်။ အဆုပ်နာရောဂါ နှင့် ဗိုင်းရပ်စ် ပိုး ကူးစက်ခြင်း တို့ပါဝင် သည်။
Chalazion (အဆီဂလန်းများပိတ်၍ အရည်အိတ်များဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ကုသမှုမပြုခင် chalazoin ဟုတ်မဟုတ် အဖြေရှာ အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ဆရာဝန်သည် သင်၏ဆေးမှတ်တမ်းနှင့် မျက်လုံးစစ်ဆေး ခြင်း ကို စမ်းသပ်ကြည့်ရှုရပါမည်။ မျက်လုံးစစ်ဆေးမှုတွင် မျက်ခွံပုံစံ၊ အရေပြား ချောမှု ကြမ်းမှု အနေအထား နှင့် မျက်တောင် ပုံစံတို့ကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ အမြင်အာရုံကိုလည်း စမ်းသပ် ပါလိမ့်မည်။
Chalazion (အဆီဂလန်းများပိတ်၍ အရည်အိတ်များဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Chalazoin သည်များသောအားဖြင့် ကုသရန်မလိုဘဲ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း သက်သာသွားနိုင်ပါသည်။ ကုသမှုသည် ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာရန် အတွက်သာ အသုံးပြု ကြပါသည်။ ရောင်ရမ်းခြင်းသည် မသက်မသာဖြစ်စေပါက မျက်ခွံကို အဝတ်ပူဖြင့် ၁၀-၁၅ မိနစ်လောက် ဖိပေးသင့်ပါသည်။ တစ်နေ့တွင် ၄-၆ ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သက်သာ သည်အထိ ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင် လုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ အဝတ်ပူဖြင့် ဖိပေးခြင်း သည် မျက်ခွံရှိ တင်းမာနေသော အဆီများကို ပျော့အောင် လုပ်ပေးပါသည်။
အခြားနည်းလမ်းမှာ မျက်လုံးမှ အရည်များ စစ်ထုတ်ခြင်းကို အားပေးရန် မျက်ခွံအား ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်၍ ကုသခြင်း ဖြစ်သည်။ မနှိပ်နယ်ခင် လက်ကို စင်ကြည်စွာ ဆေးရပါမည်။ မျက်လုံးကို သန့်ရှင်းအောင် ထားရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ဆပ်ပြာနုနုဖြင့် နွေးသော အဝတ် ဖြင့် မျက်လုံးအား တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် သုတ်ပေးခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းနိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန်သည် Corticosteroid နှင့် ပဋိဇီဝဆေးများပါဝင်သော မျက်စဉ်းများကို ပေးနိုင် ပါသည်။ ထိုဆေးများသည် ရောင်ရမ်းခြင်းကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ဖြစ်နိုင်သော ရောဂါကူးစက်မှု များကို ကုသနိုင်ပါသည်။
ဆိုးရွားသော ကိစ္စများတွင် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ Chalazoin သည် သင့်မျက်လုံးအမြင်ကို ပိတ်နိုင်သည်အထိ ကြီးထွားလာ သောအခါ ခွဲစိတ် ကုသခြင်း လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ကြီးထွားလာပါက ပုံမှန်မဟုတ်သော မျက်ကြည်လွှာ ကွေးခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက chalazoin ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများသည် chalazoin ကို ကုသရန် ကူညီနိုင် ပါသည်။
သန့်ရှင်းသော အဝတ်စနှင့် ဝါဂွမ်းစ ဖြင့် မျက်ခွံအား ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးခြင်း။
မျက်လုံးကို ညှစ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
မျက်နှာ၊ ဦးခေါင်းခွံ၊ မျက်ခွံရိုး နှင့် လက်များကို သန့်ရှင်းစွာ ထားပါ။
မျက်လုံးမိတ်ကပ် အသုံးပြုခြင်းကို ကန့်သတ်ပါ။
မျက်စဉ်းနှင့် သောက်ဆေးများ အသုံးပြုသော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာများ မသက်သာပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကုသမှုခံယူပြီး ၂ပတ်ကြာသည်ထိ chalazoin မပျောက်ပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
အကယ်၍သင့်မှာ မေးခွန်းတွေရှိပါက သင့်အတွက်သင့်တော်သော အဖြေရှာဖွေနိုင်ရန် ဆရာဝန် နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012. Print edition. Page 715.
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009).The Merck manual home health handbook.Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page 1435.
Chalazion. http://www.aoa.org/patients-and- public/eye-and- vision-problems/glossary-of- eye-and- vision-conditions/chalazion?sso=y. Accessed Jul 13
Chalazion. http://www.healthline.com/health/chalazion#Treatment5. Accessed Jul 13 2016.
Chalazion. http://patient.info/health/chalazion-leaflet. Accessed Jul 13 2016.Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,2012. Print edition. Page 715.